Mudane, Madaxweyne goormaad Wax Ka Qabannaysaa Dhaliilaha dul-hoggaanaaya Garsoorka iyo Xeer Ilaalinta
Sunday May 06, 2018 - 10:45:57 in Maqaallo by Reporter Burco
Mudane, Madaxweyne, haddii aynu dib u eegno guddoomiyayaashii Maxkamada sarre ee loo magacaabay Maxkamadda sare wixii ka horeeyay guddoomiyahan Maxkamadda sare ee maanta,
waxay ahaayeen niman Aqoon iyo khibrad u leh garsoorka, waxaannay ahaayeen niman ku soo shaqeeyay Mihnada garsoorka oo soo maray Garsoore, Qareen iyo Xeer Ilaaliye, isla markaana ahaa kuwii uu dastuurka qaranku u waajibiyay inay qabtaan xilkaa sida uu dhigaayo Qodobka 105aad ee Dastuurka jamhuuriyada somaliland, waxaanay ahaayeen niman hoggaaminaayay ka garnaqa dacwadaha kama dambaysta ah ee Maxkamadda sare ambiilka looga soo qaato iyaga ayaana gali jiray dacwadaha oo hogaamin jiray si ay u saxaan khaladaadka ka yimaada Maxkamaddaha hoose.
Sidoo kale, guddoomiyeyaashaa maxkamadda sare soo maray guddoomiyahan maanta ka hor waxay ahaayeen qaar ka jawaabi jiray cabashooyinka dadwaynaha ee ay ka qabbaan Maxkamadaha hoose, taaasoo aanay dadwaynuhu ku soo noqnoqon jirin. Haddaba, waxaa ayaan daro ah guddoomiyaha Maxkamada sare ee maanta xilka hayaa in aanu ahayn nin aqoon sharci iyo waayo aragnimo u leh garsoorka mana aha nin hore ugu soo shaqeeyay Mihnada garsoorka. Sidoo kale, maaha nin dacwadaha gala oo ka gar qaada sidoo kalenna maaha nin ka jawaaba cabashada dadweynaha ee wuxuu isu dhaafiyaa garsoorayaasha kale taasina waxay cadaynaysaa in aanu haba yaraate aqoon iyo waaya aragnimo u lahayn garsoorkaba ee uu yahay nin sifo khaldan ku yimi garsoorkiina wuxuu ku kala dhex riday qabyaalad iyo nin jeclaysi isaga oo iska fogaynaaya dadkii aqoonta sharci lahaa.
Sidoo kale mudadii uu xilka qabtay ilaa maanta waxaa is casilay dhawr iyo labaatan garsoore oo kii ugu dambeeyay uu todobaadkan is casilay waxaanay iska xasilayaan aqoon darada iyo maamul xumada gudoomiyaha maxkamada sare ee uu garsoorkii mugdiga galiyay. Waxa taa kasii daran isaga oo garsoorkii wadi kari waayay ayaa hadana waxaa la hoos keenay shaqaala hoosaadkii ay wasaarada cadaaladu xukumi jirtay isaga oo shaqaalihii hore u joogay ee meesha ka shaqaynaayay meesha ka saaray kuna badalay dad uu isagu wato oo gaar ah oo aan lagu xulan nidaamkii shaqaalaysiinta ee wasaarada cadaalada. Sidaa darteed maanta heerka uu garsoorku gaadhay cadaalad xumada qabyaalada maamul xumida maaha mid uu waligeed gaadhay waxaana sabab u ah gudoomiyaha maxkamada sare ee bilaa aqoonta ah. Hadaba mudane madaxweyne cadaaladu maaha gidaar la rinjiyeeyo oo umada dhalanteed loo dhigo ee waxaa ka wanaagsan guri xun oo cadaalad laga hoos helo. Sidaa darteed madaxweyne waxaanu kugula talinaynaa in aad degdeg wax uga qabto gudoomiyaha maxkamada sare xeer ilaaliyaha guud oo isaguna la mid ah gudoomiya maxkamada sare waayo waxaad doorashada ku gashay in aad garsoorka iyo cadaalada wax ka qaban doonto waana arin ay dadweynuhu kaaga fadhiyaan.
Garyaqaan Cabdi Cali Faarax